ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင်ရထားနှစ်စင်းတိုက်မိခြင်း။ 15 သေပြီ၊ 58 ဒဏ်ရာရ RayHaber
ပင်မစာမျက်နှာလောကASIA မှ880 ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင်ရထားနှစ်စင်းတိုက်မိခြင်း။ 15 သေ၊
13 / 11 / 2019 880 ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ASIA မှ, လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, ဗွီဒီယို
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင်ရထားနှစ်စင်းတိုက်မိခြင်း။ 15 သေ၊ 58 ဒဏ်ရာရ။ ပြီးခဲ့သည့်ညကဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင် 03.00 သည်ဒေသတွင်းအချိန်တွင်ရပ်တည်နေသည်။ ခရီးသည်ရထားသည် Dhaka ၏အရှေ့ဘက်၊ Brahmanbaria ရှိစစ်တကောင်းမှထွက်ခွာခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းကြောင်းမှလာသည့်အခြားခရီးသည်တင်ရထားနှင့်လည်းတိုက်မိခဲ့သည်။ 15 ၏လူများသေဆုံးပြီး 58 မှလူများဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
Sylhet မှစစ်တကောင်းသို့ရွေ့လျားသည့်ရထားသည် Kosba မြို့ရှိ Mondovag ဘူတာသို့ရထားဘူတာကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်။ စစ်တကောင်းမှဒါကာသို့အခြားခရီးသည်တင်ရထားသည် Mondovag ဘူတာသို့သွားခဲ့သည်။ ရထားကထိန်းချုပ်ထားသည့်စားပွဲခုံကိုရထားကအခြားရထားလမ်းကို ဖြတ်၍ ထိုတွင်ရပ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်စစ်တကောင်းမှရထားသည်ညွှန်ကြားချက်များကိုမလိုက်နာပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်စစ်တကောင်းမှရထားသည် Sylhet မှရထားနှင့်တိုက်မိသည်။
မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် 15 လူများသေဆုံးပြီးအနည်းဆုံး 58 လူများဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ဒဏ်ရာရသောခရီးသည်များကိုကိုစဘားဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး၊ ဒေသတွင်းရှိမျက်ရည်များကျသည့်ဆွေမျိုးများကအရာရှိများမှသတင်းများကိုမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းစောင့်မျှော်ခဲ့ကြသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမီးရထားကပြောကြားရာတွင်သေဆုံးသူ ဦး ရေတိုးလာနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
ဒေသရဲရဲအကြီးအကဲ Anisur Rahman ကမတော်တဆမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
2 ရထားလက်ဇန္ဒြီးယားအတွက်တိုက်မိ! သေလွန်သောသူတို့သည် 36, 123 ဒဏ်ရာရ!
ဗန်မက္ကဆီကို 5, 10 ဒဏ်ရာရသူသေဆုံးတဲ့ရထားနဲ့တိုက်မိ
နှစ်ဦးအားရထားဘာစီလိုနာ 1 100 သေဒဏ်ရာရသူများတွင်ကွဲသွားရင်
နှစ်ဦးကရထား, ပါကစ္စတန်အတွက်သေ 11 70 ဒဏ်ရာရသူကွဲသွားရင်
နှစ်ဦးကခရီးသည်တင်မီးရထားသြစတြီးယားသေ 1, 22 ဒဏ်ရာရသူများတွင်ကွဲသွားရင်
ရထားကိုအဲဂုတ္တု 15 40 သေဒဏ်ရာရသူများတွင်ကွဲသွားရင်
ဂျာမနီရှိခရီးသည်တင်ရထားနှင့်ကုန်ပစ္စည်းရထားတိုက်မိခြင်း2သေပြီ…
ခရီးသည်ရထား Collider 1 8 ဘရာဇီး၌သေနှစ်ခုဒဏ်ရာရ
နှစ်ဦးအားရထားဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဦးခေါင်းမှဦးခေါင်းတိုက်မိ! 30 ဒဏ်ရာရ
သြစတြီးယားတိုက်မိနှစ်ဦးအားရထား, မိုးသည်းထန်စွာ420 ဒဏ်ရာရ
Collider 23 ပီရူးဦးဒဏ်ရာရနှစ်ဦးအားရထား
အီတလီနိုင်ငံတွင်ရထား ၂ ခုတိုက်မိရာ 50 ဒဏ်ရာရ
ဘတ်စ်ကားရုရှားတွင်ရထားနှင့်အတူတိုက်မိ! သေလွန်သောသူတို့သည် 19
ရထားအဲဂုတ္တုပြည်၌သေလွန်သောသူတို့သည်ထမ်းန်ဆောင်မှုများ9နှင့်အတူကွဲသွားရင်
ရထား ၂ စီးသည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင်တိုက်မိသည်